နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster(13 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster များထဲမှ Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. ။
tag ကို: WLS Shaftless ဝက်အူပေါ်ကို , GL အမျိုးအစားပိုက်ဝက်အူပေါ်ကို , ရွှံ့နှင့်အတူ non ကမ်းတက်ဝက်အူပေါ်ကို
တစ်ခုတည်းဝင်ရိုး humidifier ၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဝိသေသ တဦးတည်း, DSZ မိုနို၏ပြုပြင်နိယာမ - ရိုးမြေမှုန့် humidifier: DSZ တစ်ခုတည်းရိုးမြေမှုန့် humidifier လေးအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: ဒီတော့အပေါ်ယူနီဖောင်းနို့တိုက်ကျွေးရေး, ဓါး...
လေထုအကြံပေးအဖွဲ့သွေးခုန်နှုန်း၏ filter အိတ် deduster
tag ကို: filter Tube Dedusting ပစ္စည်း , မိုင်းဖုန်ကောက်ခံရေး၏ filter ပိတ်စ , အိတ်ကေ့ Filter ကိုအိတ်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိုင်းပြည်သံကျော်သန်း 400 တန်ချိန်ထုတ်လုပ်, သံတစ်တန် 200kg ရေကယ်လွှတ်တော်မူ၏။ ခြောက်သွေ့အိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးနည်းပညာပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးဖိုထဲဓာတ်ငွေ့သန့်ရှင်းစေရန်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကရေထက်ပိုမို 0.8...
sinter ပန်းကန် deduster ၏အသစ်အမျိုးအစား
tag ကို: သွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ပလတ်စတစ်ပြား Air ကို Filter ကို , ဘုတ်အဖွဲ့ဖုန်ကောက်ခံရေးဆေးလိပ်သောက်
ဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း အဆိုပါဘွိုင်လာမိုးရွာသည့် flue ဓာတ်ငွေ့ကနေဖုန်မှုန့်ခွဲခြားသောကိရိယာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဘွိုင်လာ deduster လေ့ဘွိုင်လာနှင့်စက်မှုထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ function...
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster
tag ကို: Desulphurization နှင့် Dedusting ပစ္စည်း , ဆိုဒီယမ်ကယ်လ်ဆီယမ်ကိုနှစ်ချက်အယ်လကာလီဖုန်ကောက်ခံရေး , နှစ်ချက်အယ်လကာလီ Deduster
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulphurization ဖြစ်စဉ်ကို အသုံးပြု. ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster လုပ်ငန်းစဉ် (NaOH / Ca (OH) 2) ထုံးကျောက် / gypsum...
စက်မှု Air ကိုခှဲ Filter Deduster
tag ကို: Air ကို Filter ကိုခှဲဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Filter ကိုဆိုင်ကလုန်းဖုန်ကောက်ခံရေး , စက်မှု Air ကို Filter ကိုခွဲပေး
ကြမ်းထောင်ချောက်ဆိုင်ကလုန်း filtration ခွဲခြာ deduster
tag ကို: ကြမ်းထောင်ချောက်ဆိုင်ကလုန်း Filter ကို , ဆိုင်ကလုန်း Separation Deduster , ကြမ်းထောင်ချောက်ဆိုင်ကလုန်း Separation Deduster
ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ဆိုင်ကလုန်း filter ကို / ဆိုင်ကလုန်းခွဲခြာဖုန်မှုန့် separator စုဆောင်းကြမ်း granular Cylone ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလေကြောင်းဝင်ပေါက်, လေထွက်ပေါက်, cylindrical ခန္ဓာကိုယ်, ကန်တော့ချွန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ပြာမှုန်ရေပုံးပါဝင်ပါသည်။...
စက်မှု Filter ကိုအိတ် Deduster
tag ကို: ဖုန်မှုန့် Extraction စနစ် , filter သည့်အရာတစ်ခုစျေး , Filter ကို Tube ဖုန်ကောက်ခံရေး၏ function
သီးခြားထင်ရှားသော အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်: အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းတစ်ခုဆလင်ဒါသို့ခေါက်သည်ကို ထောက်. (1), ပု filter ကိုပစ္စည်းများ၏သိပ်သည်းဆကြီးမားသည်,...
လေထုအကြံပေးအဖွဲ့သွေးခုန်နှုန်း၏ filter အိတ် deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
sinter ပန်းကန် deduster ၏အသစ်အမျိုးအစား အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆိုဒီယမ်ကယ်လစီယမ်ကို double အယ်လကာလီ desulfurization deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Air ကိုခှဲ Filter Deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြမ်းထောင်ချောက်ဆိုင်ကလုန်း filtration ခွဲခြာ deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှု Filter ကိုအိတ် Deduster အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster from China, Need to find cheap မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Deduster, We'll reply you in fastest.